Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ကိုကိုကြီးရဲ့ ရခိုင်ခရီးစဉ် အပေါ် မေးမြန်းချက်
ကိုကိုကြီးရဲ့ ရခိုင်ခရီးစဉ် အပေါ် မေးမြန်းချက်
RFA: ကိုကိုကြီးရဲ့ ရခိုင်ပြည် ခ၇ီးစဉ်မှာ ဘယ်လို ကြုံတွေ့ခဲ့ရလဲ။
ကိုကိုကြီး - ကျနော်တို့ တခြားတိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်ခရီးစဉ်တွေမှာကတော့ ကွဲကွာနေတဲ့ မိသားစုတွေ ပြန်တွေ့တဲ့သဘောမျိုး တက်ကြွမှု ရွှင်လန်းမှု ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာ။ အခု ဒီ ရခိုင်ခရီးစဉ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ကတော့ ကိုယ်တိုင် ရောက်သွားတဲ့ အချိန်မှာ မြင်ရတာတွေ အရကတော့ ခါတိုင်း ခရီးစဉ်နဲ့ မတူဘူးပေါ့လေ။ စိတ်ထိခိုက်စရာတွေရော နောက် ကျနော်တို့ နိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အန္တရာယ် တွေ အဖြစ်ပေါ့လေ။ သတိပြုမိတာတွေရော ခံစားမှုတွေကတော့ တနင့်တပိုးကြီးပေါ့ဗျာ ဒီတခေါက်သွားရတာကတော့။
RFA : တိုင်းပြည်အတွက် အန္တရာယ်တွေ သတိပြုမိတယ်ဆိုတာက ဘယ်လိုဟာတွေလဲ။
ကိုကိုကြီး - ကျနော်တို့ စစ်တွေကို သွားတုံးကတော့ စစ်တွေမှာက
မြို့ပေါ်မှာတင်ပေါ့ဗျာ။ ရထားလမ်းကို ဟိုဘက်ဒီဘက် စည်းခြားထားသလိုမျိုး တဘက်နဲ့ တဘက် ကင်းစောင့်ရတဲ့ အခြေအနေမျိုးအထိ ဖြစ်နေတယ်။ ဒါကလည်း ဖြစ်သင့်တဲ့ အခြေအနေ မဟုတ်ဘူးပေါ့။ အဲဒီကနေ ကျနော်တို့ ဘူးသီးတောင် မောင်တောကို
ရောက်တော့လည်း မောင်တောမှာ အခြေအနေက ဌာနေ ရခိုင်လူမျုိးတွေက လူနဲစု ဖြစ်ပြီးတော့ ဒီ ဘင်္ဂါလီရွာတွေက ကျနော်တို့ သွားတဲ့ လမ်းတလျှောက်လုံးမှာ ဘင်္ဂါလီရွာတွေချည်းဘဲ ဖြစ်နေတယ်။ ကျနော်တွေ့ခဲ့တဲ့ အခါမှာ ရခိုင်အမျိုးသားကြီးတယောက်ဆိုရင်
ယောက်ျားကြီးတန်မဲ့ သူ မချိတင်ကဲ ပြောပြီး မျက်ရည်ကျတာမြင်တော့ ကျနော်လည်း မခံစားနိုင်ဘူး။ ဒီမြေဒီရေမှာ နေပြီးတော့ ဒါကို စွန့်ခွါပြီးတော့ သူတို့ ထွက်ပြေးရမယ်ဆိုတဲ့ အဖြစ်ကို သူတို့ လုံးဝ လက်မခံနိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ သူတို့ ကျားကုတ်ကျားခဲ ဒီမှာ ရပ်တည်နေတဲ့ အခြေအနေတွေ သူတို့ ပြောပြတယ်ပေါ့ဗျာ။ ဆိုတော့ ဒီကိစ္စက အတော်အလေးအနက်ထားဖို့ လိုအပ်လာပြီလို့ ကျနော် မြင်တာပေါ့ဗျာ။
RFA : ကိုကိုကြီးတို့ သွားခဲ့တဲ့ တလျှောက်လုံးမှာ အဲဒီ ဌာနေပေါ့။ ကမန်တို့ ဘရာမန်ကီတို့ ဆိုတဲ့ အစ္စလာမ် ကိုးကွယ်တဲ့ ဌာနေတွေကို တွေ့ခဲ့သေးလား။
ကိုကိုကြီး - ဟုတ်ကဲ့။ ကျနော်တို့ သွားတယ်။ သွားတယ်ဆိုတာက ဒီ မွတ်စလင်ဒုက္ခသည်တွေ များတဲ့ တလျှောက်လုံး ကိုလည်း ကျနော်တို့ သွားကြည့်တယ်။ သက်ကယ်ပြင်ရွာမှာဆိုရင် အဲဒီမှာဆိုရင်
ဒေသခံတွေနဲ့လည်းတွေ့တယ်။ တွေ့တာ့ ကျနော်က ဒီကိစ္စဟာ ဘာသာရေး ပဋိပက္ခ လို့ ဆိုတာကို ကျနော် လုံးဝ လက်မခံဘူး။ နှစ်ပေါင်းများစွာ
ပြဿနာဗျ။ အခုမှ ဖြစ်တာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ခေတ်အဆက်ဆက်မှာ ဒီ တရားမ၀င် ၀င်လာတဲ့ သူတွေ၊ နောက်ဒီဘက်က တာဝန်၇ှိတဲ့ ဌာနဆိုင်ရာ ၀န်ထမ်းတွေအပိုင်းက အကျင့်ပျက် ခြစားမှုတွေ ကြောင့်လို့ စုပြုံလာတဲ့ ပြဿနာ။ နောက်ထူးခြားချက် တခုကတော့ လူဦးရေ ပေါက်ပွားတဲ့ နှုန်း၊ အဆမတန် များတယ်။ များတော့ ကြာတော့ ဌာနေတွေ အနေနဲ့ အနေကျုံ့လာတယ်ပေါ့။ ဒီမွတ်စလင်ဘက် အခြမ်းကို သွားတဲ့ အခါကျတော့လည်း တော့်တော်စိတ်ထိခိုက်စရာပါ။ အဲဒီမှာ မြေကြီးပေါ်မှာ ဒီ ရွက်ဖျင်တဲတွေနဲ့ ဒုက္ခ သုက္ခ ရောက်နေတဲ့ သူတွေ ပေါ့လေ။ ကျနော်လည်း သူတို့ကို ပြောပါတယ်။ နိုင်ငံသား အခွင့်အရေးဟာ အားလုံး တန်းတူညီမျှ ဖြစ်ရမယ်။ ဒါ ကျနော်တို့ သဘောထားပဲလို့ ကျနော် သူတို့ကိုလည်း အခိုင်အမာပြောတယ်။ တချိန်ထဲမှာပဲ နိုင်ငံသား အခွင့်အရေးဆိုတာနဲ့ အတူ ဒါ နိုင်ငံသားရဲ့ တာဝန် ၀တ္တရားတွေ ဆိုတာလည်း ရှိတယ်။ ကျနော်တို့ ဌာနေ တိုင်းရင်းသားတွေ ကြားထဲမှာ လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်အောင် ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ သဟဇာတ ဖြစ်အောင် နေနိုင်ဖို့ကလည်း အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း ကျနော် ပြောပြတယ်။ နောက်တခုကတော့ နိုင်ငံသား ဖြစ်သည် ဖြစ်စေ မဖြစ်သည် ဖြစ်စေ လူသားချင်းစာနာမှုအနေနဲ့ကတော့ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကို တတ်နိုင်သလောက် အကူအညီပေးဖို့ ပေါ့လေ။ အဲဒါကတော့ တပိုင်းပေါ့။ လူသားချင်းစာနာမှုအရ။
တဘက်ကတော့ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကတော့ ကျနော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ လုံခြုံရေးအရကို ဒါကို အသေးစိတ် စိစစ်လေ့လာဖို့ လိုလိမ့်မယ်လို့ မြင်တယ်။
RFA : ခုနက ကိုကိုကြီးပြောသွားတဲ့အထဲမှာ မွတ်စလင်တွေက လူဦးရေမတန်တဆ တိုးပွားနေတယ်ဆိုတဲ့ ဟာမျိုးပေါ့နော်။ ပြည်ပမှာ ရှိနေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေက ပြောကြတယ်။ ရခိုင်ပြည်မှာ ရှိတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေ ကလေးမွေးဖွားနှုန်း ကန့်သတ်ခံနေရပါတယ်လို့
ပြောကြတယ်။ အဲလို အပြောနဲ့ဆိုရင် ကိုကိုကြီးတို့ ဘယ်လို တွေ့ခဲ့ရလဲ။
ကိုကိုကြီး - ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ ကျနော်တို့ အများကြီး စဉ်းစားဖို့ လိုလိမ့်မယ်။ ဒေသခံတွေကို ကျနော်မေးကြည့်တယ်။ ခင်ဗျား ဘာလူမျိုးလဲဆိုတော့ ဘင်္ဂါလီလို့ပဲ ပြောတယ်။ ဆိုလိုတာက
အောက်ခြေ သူတို့ လူမျုိးတွေကိုယ်တိုင်က သူတို့ကိုယ် သူတို့ ဘင်္ဂါလီလို့ပဲ သတ်မှတ်တယ်။ တဘက်ကလည်းပဲ ကျနော် ဘူးသီးတောင် မောင်တော
ရောက်တဲ့ အချိန်မှာ ကျနော်သိသလောက ၉၇ ရာခိုင်နှုန်းလောက်က ဒီ ဘင်္ဂါလီတွေ ဖြစ်သွားပြီ။ နယ်စပ်ဂိတ်ကိုလည်း ကျနော်ရောက်တယ်။ နယ်စပ်ဂိတ်အနေအထားကလည်း ဟိုဘက် ဒီဘက် ကူးလူးဆက်ဆံလို့ ရတဲ့ အနေအထားဘဲ။ ဆိုတော့ စစ်တွေမှာ ဆိုရင် ကျနော်သွားကြည့်တဲ့လူထဲမှာ ကျနော်နဲ့ ပြောဆိုပြီး ရင်ဖွင့်တဲ့သူကိုတိုင်က ဧည့်နိုင်ငံသား အဆင့်ပဲ ရှိသေးတယ်။ တကယ်သာ ကျနော်တို့က နိုင်ငံသား ဖြစ်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ စာရင်းဇယား ပြုစုတော့မယ်ဆိုရင် တရားမ၀င် လာရောက်နေတဲ့သူတွေ အများကြီး ထွက်လာလိမ့်မယ်။ အဲဒါကိုင်တွယ်ရင်တောင်မှ တကယ့်ကို ပညာပေးမှုတွေရော၊ အားလုံး ပူးပေါင်းဆောင်ရွာမှုတွေရော အများကြီးလိုမယ်။
RFA : ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်တွေကလည်း သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ဒုက္ခသည်များ
ဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးနဲ့ တွေ့တဲ့အခါမှာ ဒါ တဘက်နိုင်ငံက ၀င်လာတဲ့
သူတွေ ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ ဒုက္ခသည်စခန်းလိုမျုိး ဖွင့်ပေးမယ်။ ဒါကို တတိယနိုင်ငံတွေက ခေါ်ရင်လည်း ခေါ်ပါ ဆိုပြီးတော့
ပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ ဒီသဘောထားတဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကိုကိုကြီးတို့ ဘယ်လို မြင်လဲခင်ဗျာ။
ကိုကိုကြီး - နိုင်ငံတိုင်းမှာ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုတဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဥပဒေတွေ နိုင်ငံရဲ့ လုံခြုံရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဟာတွေက ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ လိုအပ်ချက်နဲ့ သဘာဝနဲ့ လိုက်လျောညီထွေ ပြဌာန်းရတာချည်းဘဲ။ တနိုင်ငံနဲ့ တနိုင်ငံ တပုံစံထဲ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ကျနော်တို့ကလည်း ကျနော်တို့ နိုင်ငံနဲ့ ကျနော်တို့ လူမျိုး ကျနော်တို့ ရေမြေရဲ့ လိုအပ်ချက်နဲ့ အညီ ကျနော်တို့ ကျင့်သုံးရမှာဘဲ။
RFA : ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးကလည်း ဒီအပေါ်မှာ တုန့်ပြန်ပြောဆိုတယ်ပေါ့နော်။ ဒီအပေါ်မှာ။ ဒါဟာ ဗမာပြည်ထဲက ကိစ္စပဲ ဖြစ်တယ်။ သူတို့ UNHCR ရဲ့ မူနဲ့ မကိုက်ညီလို့ လက်မခံနိုင်ဘူး
လို့ ပြောတယ်။ ဒီအပေါ်မှာရော ကိုကိုကြီးတို့ အနေနဲ့ ဘာများပြောချင်လဲ။
ကိုကိုကြီး - ဒီနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေ တာဝန်၇ှိတဲ့ သူတွေ အနေနဲ့က
မြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ ပတ်သက်ရင် သူတို့ သိထားသလောက် အချက်အလက်တွေနဲ့ ကောက်ချက်ချတာတို့ သဘောထားပေးတာမျုိးဟာ ကျနော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေနဲ့ လိုက်လျောညီထွေ မဖြစ်တဲ့ အခါကျရင် ကျနော်တို့ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေကိုပါ လာပြီးတော့ သက်ရောက်နိုင်တယ်။ ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် ကျနော်ရောက်ခဲ့တဲ့ ဒုက္ခသည် စခန်းတွေမှာ UN ဆိုပြီးတော့ ကြက်ခြေခတ်ထားတယ်။ INGO ဆိုပြီးတော့ ကြက်ခြေခတ်ထားတယ်။ ဆိုလိုတာက ကျနော်တို့ ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားတွေ
က အဲဒီနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအပေါ်မှာ ဘယ်လို မြင်သလဲဆိုတာကို အဲဒီ အဖွဲ့အစည်း တာဝန်၇ှိသူတွေက အလေးအနက်ထားဖို့ လိုမယ်လို့ ထင်တယ်။
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 04:05
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ကိုကိုကြီးရဲ့ ရခိုင်ခရီးစဉ် အပေါ် မေးမြန်းချက် . All Rights Reserved